Itoobiya iyo UK oo u hambalyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud | Arrimaha Bulshada
Home English News News Itoobiya iyo UK oo u hambalyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
Itoobiya iyo UK oo u hambalyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
Bulsha:- Ra'isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa u hambalyeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay mar kale Baarlamaanka Soomaaliya u doortay madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa inaan si dhow uga wada shaqeeynno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka”. ayuu Ra’iisul Wasaaraha ku yiri bayaan uu soo saaray.
Dhinaca kale dowladda Britain ayaa sidoo kale hambalyo soo gaarsiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
"Hambalyo Xasan Sheek Maxamuud, oo mar kale loo doortay madaxweynaha Soomaaliya, UK waxay rajeyneyaa inay sii waddo shaqada wada shaqeynta dhow ee ay Soomaalida uga taageereyso dhismaha xasilloonida, la dagaallanka Al-shabaab iyo taakuleynta dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an" ayay tiri wasiirka arrimaha Africa ee UK Vicky Ford.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, muddada afarta sano ah ee soo socota kadib doorasho qaadatay in ka badan 10 saac oo ka dhacday Muqdisho.
Xasan Sheekh ayaa wareeggii saddexaad ee doorashada kaga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey.
Tirada guud ee codeysay ayaa aheyd 327 cod. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa helay 214 cod, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu helay 110 cod. Waxaa hallaabay saddex cod.